ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားတဲ့ ဒါဝိတ် | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 10/11/2011
Posted in: ကျမ်းစာလေ့လာခြင်း.	Tagged: ဒါဝိတ်, သိုးထိန်း.	1 Comment
ဣသရေလလူမျိုးတို့၏ ရှင်ဘုရင် ရှင်ဘုရင်ဒါဝိတ်သည် ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူ ဟူ၍ အခေါ်ခံခဲ့ရ ပါသည်။ ၁ရာ ၁၃း၁၄ တွင် ရှမွေလက ရှောလုကို ပြောသည်မှာ သင်ဟာ မိုက်မဲသော အမှုကို ပြုပြီ၊ သင်ဟာ ဘုရားသ ခင်ရဲ့ ပညတ်တော်တွေကို မစောင့်ရှောက်ဘူး။ အခုတော့ ဣသရေလနိုင်ငံဟာ အရှည်တည်တံ့လိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ မင်း ရဲ့နိုင်ငံတော်ကတော့ တည်တံ့မှာ မဟုတ်ဘူး။ ထာဝရဘုရားသည် စိတ်နှလုံးတော်နှင့်ညီညွတ်သောသူကို ရှာတော်မူ ၏။ ထိုသူသည် လူမျိုးတော်ပေါ်မှာ မင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ ထာဝရဘုရား မိန့်တော်မူပြီ။
ဒါဝိတ်ဟာ ရှင်ဘုရင်ဖြစ်စေရန်အတွက် ဘုရားသခင် ကိုယ်တော်တိုင် ဘိဿိတ်ပေးထားသောသူ ဖြစ်သည်။ ထိုအရာ သည် သူအပေါ်တွင် ဘုရားသခင်ထားရှိတော်မူသော အကြံအစည်တော်ဖြစ်သည်။
ဒါဝိတ်ဟာ ဘုရားသခင်ရဲ့ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူဖြစ်စေဘို့ အများကြီး သင်ယူခဲ့ရပါတယ်။ ဒါဝိတ်ဆိုတဲ့ ကောင်း ကလေး ဘ၀မှာပင် မိသားစုထဲ၌ ဘုရားစိတ်တော်နှင့် တွေ့စေသည့် ၀တ်ပြုကိုးကွယ်ခြင်းနှင့် ဆိုင်သော သင်ခန်းစာ များကို စတင်သင်ကြားခဲ့ရသည်။ ဘုရားသခင်နှင့် နှလုံးသားခြင်း ထပ်တူဖြစ် ရင်နှီးစွာ ထိတွေ့မှုများကို သင်ယူခဲ့သည်။
သိုးထိန်းဒါဝိတ်အဖြစ် သိုးများနှင့်အတူ တောင်ကုန်း တစ်နေရာမှ စားကျက်ထဲတွင် အချိန်နာရီ ပေါင်း မြောက်မြားစွာ အသုံးပြုခဲ့သည်။ ထိုနေရာတွင် သူ၏ ၀ိညာဉ်သည် ၀ဲလွင့် မျောပါလျှက် စိတ်နှလုံး အကြွင်းမဲ့ လွင့်မျောကာ ဘုရားသ ခင် ကို ချီးမွမ်းခြင်း အမှုများ ပြုခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်ကို ချီးမွမ်းသီချင်းများ သီကုန်းရေးစပ်ကာ သီဆိုချီးမွမ်း၍ ဘုရားသ ခင်နှင့် အနီးကပ်ဆုံး အနေအထား တွင် ရှိခဲ့သည်။ ထိုသီချင်းများသည် ဂျူလူမျိုးများ၏ ချီးမွမ်းခြင်း သီချင်းများ ဖြစ်လာ ခဲ့သည်။ ဒါဝိတ်ဟာ သူရဲ့ ချီးမွမ်းခြင်း သီချင်းများကို သီဆိုချီမွမ်းပြီး ဘုရားသခင်ထံ ချဉ်းကပ်တိုးဝင်ခြင်းဖြင့် ဤ စင်္ကြာဝဠာကြီး၏ ဘုရားသခင်နှင့် ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်စေသော နည်းလမ်းတခုဖြစ်ကြောင်း ပို၍ပို၍ သိရှိနားလည် လာခဲ့သည်။
အိုး ဘုရားသခင်၊ ကိုယ်တော်သည် ကျွန်ုပ်၏ ဘုရားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကို ကျိုးစား၍ ရှာပါ၏။ ရေမရှိ သွေ့ခြောက် သော လွင်ပြင်၌ အကျွန်ုပ်၏ ၀ိညာဉ်သည် ကိုယ်တော်ကို ဆာငတ် ပါ၏။ အကျွန်ုပ် ကိုယ်ခန္ဓာသည်လည်း ကိုယ်တော်ကို လွမ်းစွတ်ပါ၏။ ဘုန်းတန်ခိုး အာနုဘော် တော်ကို မြင်ခြင်းငှါ သန့်ရှင်းရာဌာနတော်၌ ထိုသို့ ကိုယ်တော် ကို ဖူးမျှော်ပါပြီ။ ကရုဏာတော်သည် အသက်ထက် သာ၍ကောင်းသောကြောင့် အကျွန်ုပ်၏ နှုတ်သည် ကိုယ်တော်ကို ချီးမွမ်းရပါမည်။
ဘုရားသခင်၏ စိတ်တော်နှင့် တွေ့သောသူအဖြစ် ဒါဝိတ်သည် ဘုရားသခင်နှင့် မည်ကဲ့သို့ရင်းနှီး နိုင်မလဲ ဆိုသည့် အချက်ကို အမြဲတမ်း သင်ယူခဲ့သည်။ သိုးများကို ထိန်းကျောင်းနေရသော သိုးထိန်းတစ်ယောက်အနေဖြင့် သူကိုယ်တိုင် ဘုရားသခင်၏ သိုးတစ်ကောင်ကဲ့သို့ ခံစားကြည့်သည်။ ဆာလံ ၂၃ တွင် သူကိုယ်တိုင် ဖော်ပြထားသည်မှာ ထာဝရဘု ရားသည် ငါ၏ သိုးထိန်း ဖြစ်တော်မူ၏။ ငါ၌ ဆင်းရဲမခံရ။
ဘုရားသခင်သည် သူ၏သိုးတော်စုအတွက် နေ့စဉ်နှင့်အမျှ လိုအပ်သော အဟာရကို ကျေနပ်လောက်အောင် ကျွေးမွေး ခဲ့သည်။ သူတို့သည် လိုလေသေးမရှိ ကောင်းကြီးမင်္ဂလာ ပြည့်ဝစွာ သွန်လောင်းခံရမည်ဖြစ်သည်။
ဘုရားသခင်၏ သိုးထိန်း ဒါဝိတ်အနေဖြင့် သူသည် သူ၏နိုင်ငံသားများကို သိုးထိန်းကောင်း ပီသစွာ စောင့်ရှောက်ခဲ့ပြီး ဘုရားသခင်ကို တွေ့ရှိစေရန် လမ်းပြသွန်သင်ခဲ့သည်။ သူသည် ဣသရေလ နိုင်ငံသားများကို ဘုရားသခင်ထံ ပြန် လည် လာစေရန် အသံပြုပေးခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်၏ မျက်နှာတော်ကို ရှာဖွေရန် လူကြီးလူငယ် အားလုံးအတွက် အကောင်းဆုံး စံပြနမူနာ အဖြစ် အသက်ရှင်ပြခဲ့သည်။
← ကိုယ်တော်နဲ့ လျှောက်လှမ်းဘို့ လုံလောက်တဲ့ ယုံကြည်ခြင်း သင့်မှာ ရှိပါသလား။
မျက်မှောက်တော်တွင် အသက်ရှင်ခြင်း →
One comment on “ဘုရားသခင်ကို ကိုးစားတဲ့ ဒါဝိတ်”
Joyce on 03/10/2015 at 6:00 PM said:
ကျွန်မသိချင်သော ဒါဝိတ် ဘုရင်အကြောင်းဖတ်ရှူ ခွင့် သိခွင့်ရသည့်အတွက် ပျော်ရွှင်မိပါသည်